DAAWO SAWIRRO: Magaalada Jigjiga Oo Ku Ciidaysa Xaaladdii Ugu Xumayd Muddo Toban Sannadood Ah - Jigjiga Online
HomeSomalidaDAAWO SAWIRRO: Magaalada Jigjiga Oo Ku Ciidaysa Xaaladdii Ugu Xumayd Muddo Toban Sannadood Ah
Jigjiga (Jigjigaonline) – Magaalada Jigjiga ee caasimadda Dawladda Deegaanka Soomaalida ayaa laga dayrinayaa xaaladdeeda nadaafadeed, taas oo gaadhay halkii ugu hoosaysay muddo sannado ah.
Badhtamaha magaalada ayaa waxa ka buuxa qashin, waxaana ay biyo uskag ama bullaacado ahi ay jiifaan dariiqyada magaalada iyo goobaha ganacsiyada hortooda, kuwaas oo dhibaato ku haya dadka iyo bilicda magaalada.
Muuqaallo laga soo duubay goobaha muhiimka ah ee magaalada iyo sawirro ayaa layskula wadaagay baraha bulshada gaar ahaan Facebook, waxaana su’aal ka taagan tahay waxa ay ku mashquulsan yihiin maamulkii magaalada.
Xilligan oo ay dadku u diyaar-garoobayaan Ciidda bisha Ramadaan oo la filayo inay Salaasada berri ayaa waxa dariiqyada magaalada tuulan qashin ay shacabku soo dhigeen jidadka guryahooda hor mara oo ah halka loogu talo-galay inay dhigaan habeenkii isla markaana ay Dawladda Hoose ka qaaddo subaxnimada hore ama niska dambe ee habeenkii.
Arrintan oo halis caafimaad ka dhalan karto waqtigan oo meelo ka mid ah Itoobiya laga soo sheegayo Shuban Biyood, ayaa waxay dadweynuhu ka cabanayaan in ay la’ yihiin meelo ay ka maraan qashinka magaalada buuxiyey ee Dawladdii Hoose ay ka qaadi la’dahay dariiqyada waaweyn.
Bisha Ramadaan ayaa waxa jidka weyn ee badhtamaha magaalada daadsan qashin ku jira baco iyo weel kale oo guraha iyo meheraduhu soo dhigeen si Dawladda Hoose u qaaddo balse aanay cidi taabanin oo maalmo iska yaalla.
Goobaha uu qashinku buuxiyey waxa kale oo ka mid ah tallada caanka ah ee badhtamaha magaalada ee Sayir Maxamed Cabdulle Xasan oo u ekaatay goob qashin qub ah.
Xaafadaha 4, 5 iyo 6 ayaa waxa iyagana ka dillaacay godad waddooyinka dhexdeeda, waxaana goobaha lagu iibiyo khudradda iyo cuntooyinka ee suuqa dhexdiisa yaalla qashin badan oo ay ka dhalan karayaan cudurro.
Magaalada Jigjiga oo ah caasimaddii DDS oo ay deggan tahay madaxtooyadii, wasaaradahihii iyo hay’adihii ayaa waxay arrintani ceeb ku tahay bilicdeedii, waxaanay dadku isku weydiinayaan sababta ay dawladda dhexe usoo farogelin la’dahay waxqabad la’aanta dawladda hoose ee qabsan kari la’ shaqadii nadaafadda.
Dadka qaar ayaa ku doodaya in arrintan oo kale aanay magaalada ka dhici jirin xilligii xukuumaddii hore ee Cabdi Iley, laakiin ay tahay dhaqan shaqo xumo oo horle oo hadda soo kordhay, waxaanay ka codsadeen madaxweyne Mustafe Muxumed Cumar inuu arrintan wax ka qabto.
Shacabka Jigjiga ayaa waxay hore ula dhibaataysnaayeen laydh la’aan haysatay muddooyinkii u dambeeyey, taas oo ay u raacday nadaafad darro.
Sucuudiga Oo Ku Dhawaaqay In La Ciidayo